वर्षाले किन छाडिन् सुदुर ? « Mazzako Online
वर्षाले किन छाडिन् सुदुर ?
अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले साइन गरिसकेको एउटा फिल्म छाडेकी छिन् । वर्षाले निर्देशक रमेश वुढाथोकीले निर्देशन गर्न लागेको फिल्म सुदुरमा काम गर्ने पक्का भएको थियो । वर्षाले गतबर्ष नै यो फिल्म साइन गरेकी हुन् । तर, कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यो फिल्मको छायांकन सुरु हुन सकेन ।
निर्माताले अब भने फिल्मको छायांकन चैत्रबाट सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, वर्षाले डेढ बर्ष पर्खिएपछि फिल्म छाडेकी हुन् । फिल्मका लागि समय दिन नसक्ने भएको भन्दै वर्षाले फिल्म छाडेको वुझिन्छ । यो फिल्मको छायांकन जुम्लामा हुनेछ । सुदुरको कथा बताउने फिल्मका लागि अभिनेता पुष्प खड्कालाई अफर गरिएको छ ।
फिल्म उनले गर्ने वा नगर्ने फाइनल भैसकेको छैन । फिल्म सुदुरमा अब को अभिनेत्री हुने हुन् पक्का भएको छैन । तर, वर्षाले भने आफू आफ्नो व्यवसायमा पनि व्यस्त रहनुपर्ने तथा नयाँ फिल्मको पनि छायांकनमा व्यस्त हुनु भएकाले सुदुरलाई समय दिन नसकेको बताएकी छिन् ।